Echefu iwe, ndụmọdụ nke ọkà n'akparamàgwà mmadụ
Iwe iwe bụ echiche dị iche. N'aka nke aka, nke a dị mma (dịka ọ dị anyị ka anyị) mmeghachi omume na-ezighị ezi. N'aka nke ọzọ, site na mkpasu iwe iwe, anyị na-ata ahụhụ n'onwe anyị, ọ bụghị onye ahụ mejọrọ. Anyị na-ata onye ụta ụta maka ihe, iwe iwe, nchegbu. Anyị na-agagharị na ebe nchekwa ahụ ugboro ugboro ọnọdụ na-adịghị mma. Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ichefu mmejọ ahụ, ndụmọdụ nke ọkà n'akparamàgwà mmadụ bụ ihe na - adịghị mkpa - ọ dị mkpa ime nke a.
Iwe iwe ma ọ bụ?
"Enweghị m iwe, anaghị m echefuru" - nkwupụta a yiri ihe ị na-enweghị ike ịgbaghara. Iwe iwe bụ mmetụta nke ga-ahapụ gị nanị ma ọ bụrụ na ị naghị ebili n'ọnwụ mgbe ụfọdụ. Ònye na-adịghị ewe iwe? Ee, ma eleghị anya, ọ dịghị. Nke a dị n'ime anyị site na okike, anyị si otú ahụ chebe "M". Anyị na-achọ inwe mmetụta nke onwe anyị dịka onye na-adịghị ekwe ka onye ọ bụla merụọ anyị ahụ. Naanị ebe a bụ "ma": mmetụta a, ichebe, nwere ike ibibi onwe gị. E kwuwerị, mmeghachi omume mbụ bụ ịzaghachi n'otu ụzọ ahụ, a gwara onye ọkà mmụta sayensị a ka ọ ghara ime ya n'oge ọ bụla!
Kwa ụbọchị, anyị na-ahụ ndị nwere echiche dị iche, ụkpụrụ. Mgbe ụfọdụ, ihe anyị nabatara, ekwela ka ndị ọzọ bie ndụ anyị. Ị jụrụ onye ga-enyere ma chee na nke a bụ ihe nkịtị, ebe ọ bụ na ị nweghị ụgwọ ọ bụla nye onye ọ bụla. Ma maka onye ọzọ, ihe i mere bụ ihe mgbaàmà uche. E kwuwerị, ọ na-echere enyemaka. N'okwu a, ịnwere ike ịsị na ị gaghị atụ anya ihe ọ bụla si n'aka ndị ọzọ, ọ gaghị emejọ gị. Otu n'ime ihe kpatara iwe iwe nke ndị ọzọ bụ n'eziokwu anyị na-atụ anya na mmadụ ga-eme otu ihe ahụ anyị chere na ọ dị mma, dịka echiche anyị, nzụlite anyị. Ma onye ọ bụla nwere eziokwu nke aka ya, ya mere, ọ ga-ewe iwe ma ọ bụrụ na e mere ndokwa ụwa?
Ma, enwerekwa mwute dị iche iche. Ọ bụ otu ihe mgbe a na-akwagharị gị n'ime nsị ụgbọ mmiri. Ị na-erughị ala, ma ọ gaghị ele gị anya na nke a, n'ihi na ị ghọtara nke ọma na nke a abụghị na ebumnuche. Obi abụọ adịghị ya, mmeghachi omume ọzọ n'ime gị bụ, dịka ọmụmaatụ, omume na-ezighị ezi nke ndị mmadụ. Iwe, ihe mgbu, ọchịchọ ịbọ ọbọ - nke a bụ nanị ole na ole nke mmetụta ndị ahụ anyị nwere. Ma ha zuru ezu iji gbochie gị ike na ọṅụ nke ndụ. Ọ bụrụ na ị hapụ ka mmejọ ahụ na-aga na mmiri igwu mmiri, mgbe ahụ ka oge na-aga, ọ ga-esi ike ịnagide ya ma sie ike.
Ezi mgbaghara na-ewere ọnọdụ na ndụ anyị ọ bụghị mgbe niile. Otu n'ime ihe ndị mere anyị kwesịrị iji chefuo mmejọ bụ na site n'omume anyị, anyị ga-ebute onye iro. Ya mere, anyị na-eji dochie ọrụ onye mejọrọ ya na onye mmeri. O yiri ka ọ ga-adị mfe karị, n'ihi na anyị na-abọ ọbọ. Ma ka mmetụta nke ịdị arọ anaghị ahapụ. Ee, ihe niile n'ihi na ịbọ ọbọ enweghị ihe jikọrọ ya na ngwọta mgbaghara, mgbe anyị mara nke a, obi dị anyị ụtọ karị.
Ngbaghara, nke na - eweta gị nnwere onwe n'ime, ga - abịakwute gị mgbe ị ghọtara na ị bụghị onye ikpe. Ya mere, ọ bụghị gị ka ị ga-eme onye ikpe. Ebumnuche nke iwe na-abaghị uru, site na onye ọ na-ebute ya, ọ na-enwe ike ime ihe ọ bụla maka ọmịiko zuru oke. Echere m na ị dịghị mkpa nke a.
Chefuo iwe na-enweghị ndaputa ọ bụla. Obi abụọ adịghị ya, ọ dị mfe ịkụnye onye ahụ mebiri omume na ogidi ahụ, a pụkwara ikwu na ọbụnadị na ihe dị ụtọ karị. N'ezie, anyị si otú a na-azụlite ọnyá anyị. Ma mgbe ụfọdụ ọbụna anyị nwere ike ịkpasu oge maka imeri ndị ọzọ - si otú a na-eche na ha karịrị ha. Ya mere, ọ dị mkpa ka ị gbaghara, maọbụ ka agbagharala ma ọlị ma mụta itinye aka na mmetụta a ọzọ. Ma ndị ọkà mmụta sayensị na-adụ ọdụ ka ha dowe nhọrọ mbụ. Etiti ebe a adịghị adị.
Ngbaghara, nke a na-agbanye n'ọkpụkpụ gị, dịka ọrịa a na-agwọghị ọrịa, ga-enwe mmetụta oge ụfọdụ. Ị nwere ike ịmalite ịmalite ịtụgharị uche banyere obodo gị, mgbe nke ahụ gasịkwara na echiche nke mmesapụ aka gị bụ n'ihi gị. Na onye omekome enweghị ike iche. Na imepụta ihe na uche gị, nke ọzọ ị nwere ike imerụ ọnya ọzọ. Gini mere ị ga-eji zụlite ọganihu a ma tinye oge gị na azụmahịa efu na enweghị ekele. Ka anyị mụta ịgbaghara. Kwadebe maka eziokwu ahụ bụ na mgbanwe site na mkpasu iwe maka mgbaghara agaghị adị ọsọ. Nke ahụ bụ ihe ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-agwa anyị.
Ihe mbụ ị chọrọ ịmalite bụ ịghọta ihe kpatara nsogbu ahụ. Na mberede, ị mepụtara otu ihe elephant. N'okwu nke okwu na nke mmetụta uche, ọ bụghị mgbe niile ka ị nwere ike ịnakwere ọnọdụ ahụ. Nọrọ naanị gị, gbalịa ịkwaa ala ma nyochaa ọnọdụ ahụ ọzọ. I nwere ike ide ihe ụfọdụ na akwụkwọ, Usoro a ga - enyere aka lee ihe mere n'akụkụ.
Hapụ mmetụta uche na-adịghị mma gị. Naanị ihe a ga-esi na-eme ka mmiri ghara ịbụ ndị gbara ya gburugburu! Ọ dị mma ịbanye maka egwuregwu ma ọ bụ ihe okike. Nhọrọ kachasị mma abụghị iji tinye mkpesa, kama igosipụta ihe niile n'oge. Ma n'agbanyeghị otú o si dị, ọgwụgwọ na-abịa site n'ịmara. N'ọnọdụ anyị, ịhụ na ị na-ewe iwe na iwe.
Jụọ onwe gị ihe mere na ị gaghị ekwe ka mgbaghara. E kwuwerị, ọ bụrụ na ọ dị njọ, ihe kpatara ya nwere ike ịbụ onwe gị maka gị. Dịka ọmụmaatụ, kọwaa ihe mere ha ji adaba, onye ahụ mejọrọ bụ ụta maka ihe ọ bụla. Ma ọ bụ bulie ùgwù onwe gị, mee ka onye ọzọ nwee obi amamikpe. Ọ chegharịrị, ma ị gaghị agbaghara ya. Nabatara onwe gị na ezi ebumnobi nke iwe iwe gị, naanị na nke a ị nwere ike ikwu maka "mgbake".
Gbalịa ghọta onye na-emegbu gị. Ma eleghị anya, ọ chọghị imerụ gị ahụ, ya mere e nwere ọnọdụ. Ma ọ bụ ọ gbalịrị ịkọrọ gị ihe ị na-amaghị. Ghọta ọnọdụ nke esemokwu gị n'echiche gị ma gbalịa ile ya anya site n'aka onye na-ekiri ya. Ngbanwe site na ọchịchọ ịbọ ọbọ maka mgbaghara ga-eme ka ị nwee ezi mmetụta - ọmịiko. Nke ahụ bụ, gbalịa na echiche na omume nke onye ọzọ. Ọ bụrụ na emere gị nsogbu ahụ n'ebumnuche, ọ dịghị onye na-agwa gị ka ị hụ ma ọ bụ mee ezigbo enyi gị. Ọ bụ naanị banyere mgbaghara, nke ọ na-adị mfe karịa maka gị.
Kwere m, ị gaghị atụfu ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị kpebie ịmalite imekọrịta. A sị ka e kwuwe, o doro anya na ọ bụrụ na ịnweghị ike ichefu mmejọ, mgbe ahụ, onye ahụ pụtara ihe nye gị. Ị gaghị enwe ike ijide n'aka na onye ahụ mejọrọ adịghị emekpa gị ahụ na obi amamikpe na egwu ịbịakwute gị. Buru nzọụkwụ mbụ, ya mere ọ ga-adị mfe maka onye ọ bụla na, nke mbụ, maka gị.
Echefula na na onye ọ bụla, e nwere ma ndị na-adịghị mma ma dị mma n'akụkụ. Mgbe anyị nwere iwe, ihe niile dị mma na-ekpuchi site na ihuenyo. Na isi m, a na-agbagha ihe ngosi nke omume ọjọọ ndị gara aga. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka onye ịgbagha agbaghara gị, leba anya na njirimara dị mma nke onye mejọrọ. Mee ka o megheere gị, ma onye maara, ma eleghị anya ị ga-achọta ọtụtụ obi ụtọ na nke ọhụrụ.
Ọzọkwa, mgbaghara dị gị mkpa. Emela ngosi nke mmesapụ aka site n'omume a, ma ọ bụ ihu ọma. Nke a ga - egosi na ị kpebiri na ị ga - ebi ndụ n'emeghị ihe ọ bụla.
E nwekwara okwu ndị yiri ka ọ gaghị ekwe omume ịgbaghara ha. Na elixir azụ azụ mbụ anyị na-abọ ọbọ. Ma, ịbọ ọbọ bụ ịnyagharị ọzọ iji mee ka nganga gị dị nro. Nke a abụghị nhọrọ! Na ntụgharị - a eri nke nwere ike ijikọ gị n'onye ahụ mebiri ruo ogologo oge. Ozugbo ị na-enyocha onwe gị, ị ga-emesị bụrụ onye nwere onwe gị pụọ n'agbụ ma nweta nnwere onwe dị n'ime oge ahụ. Ọ bụrụ na ị maara otú ị ga-esi gbaghara ndị ọzọ, mgbe ahụ gị onwe gị kwesịrị mgbaghara.
Ihe ọzọ dị mkpa: mara otu esi agbaghara onwe gị. Ichegharị na iru uju maka mmejọ ndị gara aga abaghị uru. Nke a bụ ihe ịrịba ama nke njirimara na-adịghị ike. Site n'amamihe ka ha si emehie. Mmadu nile enweghi nmehie, anyi abughi ndi ozo. Ọ bụrụ na ị kpebie ichefu iru uju gị otu ugboro, ị ga-ege ntị na ndụmọdụ nke ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ. Mgbe ahụ, usoro ịgbagha mgbaghara ga-agabiga ngwa ngwa ma na-enweghị mmerụ maka mmetụta ndị ahụ mebiri.
Kedu ka esi ghọta ma ọ bụrụ na nwanyị kwesịrị ekwesị maka nwanyị
Anyaụfụ abụghị naanị ịkpọasị n'onwe ya
Ụmụ nwanyị na-etinye aka na nkà mmụta uche
Kedu ka ị ga-esi jụ onye ọ bụla ka ọ gbakwuru mama ya oge niile?
Otu esi eme ka mkparita uka a, otu esi abia onye na - adighi nma
Kedu mgbe nwa agbọghọ na-ele anya n'ebe nwoke ahụ nọ?
New SesDerma C-Vit maka akpụkpọ anụ
Achicha "Snow White"
Ànyị chọrọ ụkpụrụ omume na Ịntanetị, ma ọ bụ Skype "ICQ" abụghị enyi?
Ụzọ a na-esi agwọ ọrịa. Ihe banyere hypnosis, yoga na ndị ọzọ ...
Ime ime di na mmalite
Kedu esi ekpughe mmekọahụ?
Nkpuchi na akwa: ihe kacha mma n'ụlọ ntụziaka maka ntutu
Puff pastry na ham
Ịwa ahụ nke Julia Nastova nke na-emeghị nke ọma na-eduga ná nnukwu nsogbu, foto
Agwa na akwụkwọ nri maka oyi
Ihe ngwọta nke tii willow: ngwa, ntụziaka, contraindications
Mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ
Ihe na apricots
Esi mee ka nwoke na-agba chaa chaa
Ụzọ ndị mmadụ si agwọ ọgwụ herpes zoster
Ebube "Mai Tai"
Masks maka nsogbu akpụkpọ ahụ n'ụlọ